ह्याकिङको हल्ला- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २७, २०७६ विजय तिमल्सिना
संयोग भनौं वा विडम्बना  ।
दुई साता अघि शनिबार जब चिनियाँ समूहले नेपाली बैंकका एटीएमबाट अनगिन्ती रकम झिकिरहेको थियो त्यही बेला दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटलमा थ्रेटकन नाम दिइएको साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जारी थियो । साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी कामलाई बोलीचालीको भाषामा ह्याकिङ भन्ने पनि चलन छ भलै यसमा लगाइने अर्थहरू अनेक छन् ।
एटीएम ह्याक गरी पैसा झिकेको खबर आएपछि नेपाली बैंकको मात्रै होइन, सबैतिर साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ भन्ने चर्चा चल्यो । तर, सोही सम्मेलनमा सहभागीहरूको संख्या र उत्सुकता हेर्नेहरूलाई भने नेपाल साइबर सुरक्षामा कमजोर होला भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
रुचि हुनु र साँच्चिकै ह्याकर बन्नु भिन्न कुरा हो । तर रुचि भएकाहरू ह्याकर बन्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ किनकि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ संसारका ८० प्रतिशतभन्दा बढी ह्याकरहरू आफैंले सिकेर बनेका हुन् । यसको अर्थ हो, उनीहरू विश्वविद्यालयको पढाइ वा डिग्रीको मार्कसिटले होइन, रुचि लागेर आफैंले सिकेका हुन् ।
आफैंले सिकेर ह्याकर बनिने भए सम्मेलनमा सहभागी भएर के फाइदा ?
ह्याकर सम्मेलन आयोजना गर्ने कम्पनी थ्रेटनिक्सका एक संस्थापक सचिन ठकुरी यस्ता सम्मेलनले विश्वभर साइबर सुरक्षाको विषयमा भइरहेको नयाँ अध्ययन र भविष्यमा आउन सक्ने सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ज्ञान दिन्छ । ‘साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले केके पत्ता लगाए ? कुन विधि प्रयोग गरेर अध्ययन गरे भन्ने जानकारी यस्ता सम्मेलनमा पाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सायद उनको बुझाइमा सहमत भएकाहरू धेरै छन् । अगस्ट ३१ मा सम्मेलन हुनुअघि साइबर सुरक्षामा रुचि भएकाहरूका लागि दुई दिन वर्कसप चलाइएको थियो । जसमा ६२ जना सहभागी थिए । यीमध्ये अधिकांश राजधानीका विभिन्न कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू हुन् । टिकट शुल्क २० र २७ हजार रुपैयाँ राखिएको वर्कसपमा यत्ति धेरै मानिसको सहभागिताले नयाँ पुस्तामा साइबर सुरक्षाप्रतिको रुचि बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
वर्कसपमा सहभागीलाई जर्मनीका मारियो हेडरिचले ब्राउजर सेक्युरिटी र डिजिटल फरेन्सिक विज्ञ एन्ड्रयु स्मिथले डिजिटल फरेन्सिक र तथ्यसम्बन्धी ज्ञान बाँडेका थिए । अघिल्लो शनिबार भएको सम्मेलनमा भने प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विज्ञ अमेरिकी नागरिक जिम मनिकोले कि नोट स्पिच दिएका थिए ।
नेपालमा ह्याकर कल्चर स्थापित गराउन यो सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने आयोजक संस्था थ्रेटनिक्सका संस्थापक ठकुरी बताउँछन् । ‘ह्याकिङमा रुचि जगाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको तालिम प्रदान गर्न र यहाँ साइबर सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था विकास गर्नका लागि सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनी भन्छन् । ठकुरी आफैं अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर समुदायमाझ परिचित छन् । उनले केही महिना अघि मात्रै चीनको सांघाईमा भएको माइक्रोसफ्टको साइबर सुरक्षासम्बन्धी सम्मेलन ब्लुह्याटमा प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए । ठकुरी र प्रकाश शर्माले स्थापना गरेको थ्रेटनिक्ससँग अहिले १५ जनाको टिम छ ।
थ्रेटनिक्सले गरेको यो दोस्रो सम्मेलन हो । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै खालको सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । ‘अघिल्लो वर्ष सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्मेलनको जानकारी बाँड्दा सोचेको भन्दा बढी मानिस आएर थाम्नै गाह्रो परेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष सुटुक्क गर्न खोज्दा पनि सोचेको भन्दा बढी सहभागी भए ।’
सुटुक्क सम्मेलन गर्दा पनि धेरै मानिसहरूको सहभागिता हुनु विद्यार्थीहरूमा भएको ह्याकिङप्रतिको रुचि ठान्छन् उनी । यो वर्ष वर्कसपसहित सम्मेलनमा सहभागी २ सय बढीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी नै थिए । ‘गत वर्ष बढी विभिन्न कार्यालयमा काम गर्नेहरू सहभागी भएका थिए,’ ठकुरी भन्छन्, ‘यो वर्ष विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता रह्यो ।’
फेरि जोडौं एटीएम ह्याकिङकै कुरा । चिनियाँ ह्याकरले नेपालको वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोग गर्ने नेप्स नामक प्रणाली नै ह्याक गरी एटीएमबाट मनलाग्दी पैसा निकाले । के यस्ता ह्याकिङ रोक्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा छैनन् ? नेपालमा साइबर सुरक्षामा काम गर्ने जनशक्ति करिब ४० जना रहेको ठकुरीको बुझाइ छ । ‘यस्ता घटना डिफेन्स मात्रै गर्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा प्रशस्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर घटना भइसकेपछि अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति भने छैनन् ।’
‘कुनै पनि सफ्टवेयरलाई पूर्ण रूपमा
ह्याकरबाट सुरक्षित गराउन त सकिन्न तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
साइबर सुरक्षा वा भनौं ह्याकिङमा रुचि भएकाहरूको संख्या भने करिब एक सयको हाराहारीमा रहेको उनको बुझाइ छ, जसले भविष्यमा आफूलाई ह्याकरका रूपमा प्रमाणित गर्न सक्छन् । ‘भविष्यमा यी सबै ह्याकर भए भने यिनलाई काम दिन सक्ने बजार भने नेपालमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ह्याकरलाई २–४ लाख तलब दिएर राख्न सक्ने कम्पनी नेपालमा सीमित छन् ।’
तर, ह्याकिङमा रुचि भएकालाई नेपाली बजारमै बिक्नुपर्छ भन्ने छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर, आफूलाई प्रमाणित गरे अवसर जति पनि हुन्छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘आफूलाई अब्बल भने बनाउनुपर्छ, पैसाको समस्या पर्दैन ।’ ठकुरी आफैंले भने गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीका उत्पादनमा रहेका कमजोरी पत्ता लगाएर पैसा र नाम दुवै कमाएका छन् ।
twitter : @bjtimalsina
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १०:४३
भाद्र २७, २०७६ दिप्ती सिलवाल
पवित्र तीर्थस्थल कैलाश जाने तयारी सात महिना अघिबाटै थालेकी थिएँ  । त्यसैको अभ्यासमा मुक्तिनाथ र पुनहिलसम्म पुगें  ।
पवित्र तीर्थस्थल कैलाश जाने तयारी सात महिना अघिबाटै थालेकी थिएँ । त्यसैको अभ्यासमा मुक्तिनाथ र पुनहिलसम्म पुगें । फेब्रुअरीदेखि दैनिक ४–५ किमि हिँड्ने/दौडनेसँगै एक घण्टा योग गरेकी थिएँ । यस्तो अभ्यास पहिला कहिल्यै गरेकी थिइनँ । तैपनि पवित्र तीर्थस्थल कैलाश यात्रामा त्यस्तो धेरै अपेक्षा गरेकी थिइनँ । इसा फाउन्डेसनद्वारा गत जनवरीमा आयोजित सत्संगमा कुरा हुँदा कैलाशप्रति मोहित भएकी थिएँ । एकपल्ट सुन्दै जान मन लाग्यो । हिम्मत गरें । आफन्तहरूले ‘ओहो ! कैलाश जाने’ भने ।
सद्गुरु जग्गी वासुदेवले एकदमै ऊर्जा महसुस गर्न सकिने स्थान भनेपछि कैलाश मोह बढेको हो । सद्गुरुसँग सत्संगमा सहभागी भएपछि कृष्ण मन्दिर (पाटन), पशुपतिनाथ र बौद्धको दर्शन गर्‍यौं । संयोगले पशुपतिनाथमा चारै ढोका खुलेका बेला पुगियो । अनि भोलिपल्ट काठमाडौंलाई बिदाइ गर्दै लाग्यौं ल्हासातिर । डेढ घण्टाको विमान यात्रासँगै कैलाश दर्शनको आरम्भ भयो ।घरमा दलाई लामाको पोतला दरबारतिर लागेदेखि सम्पर्क नहुन सक्छ भनेकी थिएँ ।
त्यसैले बेलाबेला सम्पर्क गर्दा अचम्भित भएँ । चाइनिज सिम प्रयोग गरिएन, अरू नचल्ने । मानसरोवर र कैलाश पुग्नुअघिका होटलहरूमा वाईफाई थियो तर एउटा म्यासेज पठाउन ५ मिनेटमा पनि मुस्किल पर्‍यो । एकदमै सुस्त । फोटो त पठाउनै नसकिने । मानसरोवर पुगेपछि ५–६ दिन त सम्पर्कविहीन नै भइयो ।
रुट कस्तो होला ? कैलाश पुग्न सकिन्छ/सकिँदैन ? डर लाग्यो । लेक (हाई अल्टिच्युट सिकनेस) लाग्ने डर छँदै थियो । मलाई मुक्तिनाथ (समुद्री सतहबाट ३८०० मिटर उचाइमा) जाँदै टाउको दुखेको थियो । त्यसैले कैलाश (६,६३८ मिटर) को नजिक पुग्ने भनेपछि त्यसै डर लाग्ने भयो । हाम्रो अन्तिम गन्तव्य कैलाशको काख देरापोख थियो । त्यसैले नर्भस त थियो नै, सँगै उत्तिकै उत्सुक पनि ।
मेरो शरीरले त्यो उचाइसम्म पुग्न सक्छ/सक्दैन भन्नेमा शंका थियो । तर, गाइडहरूको सल्लाहले सहज बनायो । हामी ७१ जनाको समूह तीन वटा बसमा थियौं । साथमा एउटा एम्बुलेन्स । अक्सिजन सिलिन्डर त बसमै अनिवार्य थियो । धेरैलाई चिसो र खोकीले सतायो । धेरै यात्रु विदेशी थिए । सास फेर्नै गाह्रो भयो भनिरहेका थिए । आफैं डराउने (एन्जाइटी अट्याक) ले धेरैलाई सतायो । हरेक बिहान ब्रेकफास्ट एकातिर मेडिकल परीक्षण अर्कोतिर हुन्थ्यो । हामीसँग एक जना डाक्टर थियो । ल्हासा, सिगात्से, सागा, मानसरोवर र कैलाशमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बेस स्टेसन नै थियो । सबैको हरेक दिन दुईपल्ट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्थ्यो । त्यसैले केही भइहाल्यो भने समस्या हुँदैन भन्नेमा ढुक्क थिएँ । पाँचौं दिन मानसरोवर पुग्यौं । अत्यन्तै आकर्षक लाग्यो ।
मानसरोवरको सौन्दर्यलाई महसुस गर्न सकिन्छ तर शब्दमा बयानै गर्न सकिँदैन । शताब्दीयौंदेखि उस्तै कसरी रहेको होला ? अनेक प्रश्न उब्जिए । नीलो र स्वच्छ पानी । हेर्दाहेर्दै रङ फेरिने । उस्तै सफा आकाश । केही नसोची हेरिरहन मात्रै मन लाग्छ । एक छेउबाट अर्कोतिर किनारा नदेखिँदा आफू कति सानो प्राणी भन्ने लाग्यो । तालमै स्नान गर्न दुई वर्षअघि बन्देज लगाइए पनि पानी बाहिर निकालेर नुहाउन पाइने रहेछ ।
मानसरोवरमा दुई रात बसेपछि देरापोख पुगियो । कैलाश पुगेर आध्यात्मिक रूपमा केही सिकिन्छ भन्ने थियो । अन्ततः लक्ष्यमा पुगियो भन्दा नै भावनात्मक भएकी थिएँ । ‘वाह आइपुगें’ भन्ने भयो । पुगेको दिन कैलाश पर्वतलाई बादलले छोपेको थियो । बेलुका पानी पर्न थाल्यो । बिहान हिउँ । पहिलोपल्ट हिउँसँग साक्षात्कार गरें । हामी कैलाश दर्शनका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा थियौं । बिस्तारै हिउँ रोकियो । कैलाश देखिन थाल्यो । सबैले ध्यान गर्‍यौं । अत्यन्तै मोहित पार्ने स्थान रहेछ । कैलाशमा केही न केही छ, यत्तिकै सबैले ढोगेको होइन रहेछ भन्ने लाग्यो ।
सुरुमा अलिकति मात्रै कैलाश हेर्न पाउँदा पनि दंग थियौं । तेस्रो दिनको कैलाश दर्शन सानदार रह्यो । नीलो आकाशमा सेतो कैलाश अर्कै लाग्यो । स्वच्छन्द कैलाश । शिरमा दूध खन्याएजस्तो । घामको प्रकाशले बलिरहेजस्तै देखिने कैलाशको रूपको त बयानै गर्ने शब्द नै भेट्दिनँ । उक्त दृश्यको अनुभवलाई कसैले भनेर वा फोटो, भिडियो हेरेर रमाइलो मान्न सकिँदैन । अहिले बसले कैलाशको काखैमा पुर्‍याउँछ । समस्या लेक लाग्छ कि भन्ने मात्रै हो । पहिला कसरी जान्थे होलान् ? सम्झँदा पनि आश्चर्य लाग्छ ।गन्तव्यमा पुगेपछि आँट गरे सक्ने रहेछ भन्ने भयो र आफैंप्रति विश्वास बढ्यो । यो यात्राले सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ । आफ्नो काम नगर्दा रिसाउने बानीलाई कम गर्दै शून्यमा झार्ने अभ्यासमा लागेकी छु । जीवन शरीरमात्र होइन, यसको परिधि फराकिलो रहेछ । ठूलो होउ, जागिर खाउ, पैसा कमाउ मात्रै जीवन होइन रहेछ ।
कैलाशबाट बगेको सेतो र स्वच्छ कलकलाउँदो पानीको स्वादै अर्कै थियो । साँच्चै प्राकृतिक लाग्ने । बाटोमा देखिने धेरै तालहरू पनि उस्तै आकर्षक । चाइनिज र तिब्बतियन भाषामा लेखिएका नामलाई भने बुझ्न सकिएन । दार्चेन यमद्वार, सागा, सिगात्से हुँदै ल्हासा फर्कियौं । सैनिक क्षेत्र भएकाले सागामा फोटो खिच्न नपाइने रहेछ । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म सडकका दुईतिरै रूख रोपिएको रहेछ ।
उचाइतिर जाँदा भने बुट्यान हुँदै सुनसान नै देखिन्छ । बालुवाका ढिस्काहरू पनि देखिए । त्यो दुई साताको यात्रामा हरेक दिन केही न केही सिक्ने अवसर पाएँ । गाइडहरू एकदमै रमाइलो गर्थे । स्थानीय मानिसहरूसँग सम्पर्क भएको भए त्यहाँको जीवन शैलीबारे पनि जान्न पाइन्थ्यो, अनुभव बाँड्न पाइथ्यो । दुई लेनको सडकमा गाडी गुडिरहेको छ तर मान्छे देख्नै नपाइने रहेछ । कतै फाट्टफुट्ट घर देखिए । मान्छे कतै कतै एक–दुई जना मात्रै । सुनसान नै थियो बाटो । यस्तो ठाउँमा एकअर्काको सहयोगबिना बसाइ वा यात्रा सम्भव हुँदैन ।
तिब्बतका पहाडहरू एकदमै आकर्षक रहेछ । पूरै चट्टानमा कला भरिएजस्तै । एकदमै भिन्न लाग्यो । तिब्बतियन अक्षरमा ढुंगामा कुँदिएका बौद्ध मन्त्र र लुङ्दरहरूले सुनसान ठाउँलाई पनि रंगीन बनाइदिएको थियो । भेडा र याकको बथान भेटिइरह्यो । तिब्बतका काग कति ठूला ? चकित परे । एक मर्मोट (गिनीपिगको एक प्रजाति) लाई चकलेट दिँदा प्वालबाट अरू लस्करै निस्किँदा खुबै रमाइलो लागेको थियो । त्यहाँका सार्वजनिक चर्पी भने बस्नै नसकिने रहेछ । त्यसैले प्राकृतिक चर्पी नै उपयुक्त ठान्यौं ।
कैलाशतर्फ लाग्दा सबै उत्साहित थियौं । डर पनि थियो । हामी सबै कैलाशलाई हेरेर चकित भयौं । उभिन गाह्रो भएकाहरू घोडा चढेरै भए पनि पुगे । दार्चेनबाट करिब तीन घण्टाको ट्रेकिङ एकदमै रमाइलो भयो । स्वदेशमा डेंगुले सताइरहेको बेला चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा त्यतिको उचाइमा पनि लामखुट्टे देख्दा भने ट्वाँ परें । खुला आकाशमुनिको सीधा बाटो जति हिँडे पनि नपुगिने र नथाकिने खालको थियो । यात्राले नयाँ सोच त दिन्छ नै । साथै आध्यात्मिक रूपले पनि ऊर्जा भरेर आएका छौं ।
अपडेटः आइतबार, १८ जेठ, २०७७ । १६ : ३० बजे